कश्मीर क्षेत्रबारे अभिव्यक्ति दिने बेलायती सांसदलाई भारत प्रवेशमा रोक !
कश्मीर क्षेत्रबारे अभिव्यक्ति दिने बेलायती सांसदलाई भारत प्रवेशमा रोक !
नयाँदिल्ली - बेलायती सांसदलाई भारतीय अधिकारीले भिजा अनुमति दिएका छैनन् । विवादित कश्मीर क्षेत्रबारे संसदहरुको समूहको नेतृत्व गर्दैआएकी बेलायती सांसद डेबी अब्राहम्सलाई नयाँदिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै यहाँका अधिकारीले रोकिदिएका हुन् ।
डेबी बेलायतको लेबर पार्टीको तर्फबाट सांसद हुन् । जो भारतमा आफ्नो परिवारलाई पनि भेट्ने योजनामा थिइन् । डेबी यही सोमबार दुबइबाट नयाँदिल्ली आइपुगेकी थिइन् । विमानस्थलमा अधिकारीले उनको ‘डकुमेन्ट’ हेरेपछि टाउको हल्लाउँदै उनलाई भारतमा बस्‍न नदिएका हुन् ।
अब्राहम्सले विज्ञप्ति निकाल्दै यसबारे जानकारी गराएकी छन् । विमानस्थलमै अधिकारीले उनलाई भिजा अस्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै डेस्क छाडेको बताइन् । ‘जब उनी आए, उनी असाध्यै रुखो र रिसाहा देखिएका थिए,’ डेबीले भनेकी छन् । त्यसपछि उनले आफ्नो आफन्तलाई बोलाइन् । जसले बेलायती उच्च आयुक्तलाई सहयोगको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ ।
‘प्रष्ट कुरा के भने, मेरा भारतीय आफन्त छन् । जोसँग मैले भेट्ने कुरा थियो । र भारतीय कर्मचारीले मलाई साथ दिनेथिए,’ अब्राहम्सले ट्वीटरमा लेखेकी छन् ।
‘सबैका लागि न्याय र मानवअधिकारका लागि नै म राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुँ । म आफ्नै सरकार र अन्यसँग यी मुद्दालाई लिएर निरन्तर चुनौती दिनेछु,’ उनले लेखेकी छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बेलायती सांसद डेबी भारत प्रशासित कश्मीरको पक्षमा बोल्दैआएकी छन् । साथै भारत सरकारले संविधानबाट धारा ३७० हटाएकोमा आलोचना गर्दैआएकी थिइन् ।